Fiangonana Archives - Page 2 sur 4 - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fifidianana Sampana sy Komity FLM Orléans – 22 des. 2019
« … ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara … » Hebreo 10:24 Isaorantsika Jesosy tamin’ny fitantanany ny Fiangonana tao anatin’izay fe-potoam-piasana 2015-2019 izay. Izy no nitantana, na dia maro aza ireo tsy fahamendrehantsika, ireo ady am-panahy sy ireo asa natrehina. Nitondra antsika tahaka ny Mpiandry tsara tokoa Jesosy ka mendrika atolotra azy …
NY TEOLOJIAN’NY ADVENTO (Impiry tokoa moa ny Tompo no ho tonga eo amin’ny fiainantsika?) 1- MBOLA HO AVY sy EFA TONGA, no hafatry ny Advento. Toa mahagaga koa izany, milaza inona ireto? Ndeha lazaina amintsika, ny venti-kafatry ny teny. Ny Fahalalàna hitombo, ny Finoana hiahery. 2- EFA TONGA ny Mpamonjy, tonga tao Betlehema Tonga Nofo …
Alahady 2 desambra, Fetin’aina 2018 – Alahadin’ny Advento
JESOSY IRERY IHANY Natokan’ny fiangonantsika FLM eto Orléans ho fetin’aina io fotoana ho fisaorantsika an’Andriamanitra noho ny taom-baovaom-piangonana diavina amin’io. Hisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Entanina isika hitondra ny ankohonantsika tsirairay sady hanasa ny namana sy tapaka hiara-hidera an’Andriamanitra amin’izany. Hisy valopy ho zaraina ho an’ny isan-tokatrano. Hanomboka amin’ny 10 ora sy 30 min ny …